म चलचित्रमा मात्र गुण्डा हुँ –पुस्कर भट्ट – Business Sansar
म चलचित्रमा मात्र गुण्डा हुँ –पुस्कर भट्ट
नेपाली सिनेनगरीमा १० बर्ष देखी निरन्तर चलचित्रका लागी नै भनेर लागी परेको एक नाम हो पुस्कर भट्ट । जो सानोमा बलिउडमा स्टार नायक हुन्छु भन्ने सोचाईले भारत सम्म पुगेका थिए । तर बलिउडमा नायक नभई पेट पाल्नका लागी भारतको एक होटलमा भाडा माझने काम गर्न थाले । त्यसपछि बलिउडमा मात्र नभई चलचित्रमा कहिले पनि अभिनय नगर्ने बाचा गरे । सुदरपश्चिमको महेन्द्रनगरमा जमेर हाल काठमण्डौमा बस्दै आएका पुस्कर यति बेला नेपाली चलचित्रका निकै प्रख्यात गुण्डाका नामले चिनिन्छन् । नेपाली चलचित्रमा झण्डै ६० वटा चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका र भोजपुरीमा झण्डै एक दर्जन चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका पुस्करलाई सबै दर्शकले चलचित्रबाट एक गुण्डाको नामले चिन्दछन् । १६ बर्षको उमेरमा वैवाहिक जिवनमा बाधिएपछि पुस्करलाई विहान बेलुकीको पेट भर्नका लागी निकै ठुलो समस्या आइपुग्यो । र अनि कमाउनका लागी आउदी अरेवीया पुगे । आउदी अरेवीयामा काम गर्दै जादाँ ६ महिनाको छुटी लिएर नेपाल फर्केपछि उनका नजिकमा मित्र नायक विराज भट्ट सगँ उनको भेट भयो । नायक विराज भट्ट सगँ भेट भएपछि उनी विस्तारै विस्तारै चलचित्रको पर्दामा देखिन थाले । तिनै नेपाली चलचित्रका निकै प्रख्यात खलनायक पुस्कर भट्ट सगँ सहकर्मी मनिष दाहालले तयार पर्नुभएको कुराकानी ः
१.तपाईलाई चलचित्रमा भित्राउने व्यक्ति नायक विराज भट्ट हुन भनिन्छ नी हो ?
सहि हो । मलाई चलचित्रमा भित्राउने विराज भट्ट नै हुनुहुन्थो । विराज भट्टका कारणले नै म यस क्षेत्रमा छु । विराज मेरो गाँउले अनि जात पनि मिल्ने भएका कारण म विराज सगँ नजिक थिए । त्यसैले पनि मलाई विराज जिले यसक्षेत्रमा भित्राउनुभएको हो ।
२.विराज भट्ट कस्तो मान्छे हुनुहुन्थो ?
उहाँ एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुन्थो । उहाँ नराम्रो गर्ने मान्छेलाई सहि ठाँउमा ल्याउनुहुन्थो । मलाई लाग्छ उहाँ चलचित्रका लागी नै जन्मनुभएको हो । उहाँले खुकुरी चलचित्र खेल्दा उहाँले चलचित्र अभिनय गर्दा खेरी खिचेका तस्विरहरु हामीलाई देखाउनुहुन्थो । उहाँ निकै खुसी हुनुहुन्थो तर विराज जिको सो चलचित्रमा सानो रेल थियो तर पनि उहाँ निकै खुसी हुनुहुन्थो । उहाँ बानेश्वरको हाइटमा बस्नुहुन्थो धेरैले चलचित्र खेलाइदिन्छु भन्थे तर सबैैले ठाटिदिन्थे तर विराज जि निकै संधर्ष गर्ने मान्छे हुनुहुन्थे त पो आज स्टार हुनुहुन्छ ।
३.तपाईले अभिनय गर्नुभएको पहिलो चलचित्र कुन हो ?
मैले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र अग्नी ज्वाला नै हो । जसलाई दयाराम दाहाल जिले निर्देशन गनुभएको थियो ।
४.तपाई प्राय जसो चलचित्रमा निकै खतरनाक गुण्डाको रोल गर्नुहुन्छ,तपाईलाई दर्शकले कसरी चिन्नु हुन्छ आम दर्शकको विचमा जादाँ ?
हाँ.हाँ.हाँ । मैले अभिनय गरेको चलचित्रको पात्रको नामले नै मलाई बोलाउनुहुन्छ । कहिले चक्रे नामले बोलाउनुहुन्छ कहिले गुण्डा भनेर बोलाउनुहुन्छ । जे होस निकै खुसी लाग्छ ।
५. धेरै दर्शकले तपाईलाई गुण्डा भनेर बोलाउदाँ किन यस्तो खाले अभिनय गरेछु भनेर दिक्क लाग्दैन् ?
अहँ, लाग्दैन् मलाई जस्तो सिनले चलचित्रलाई सोभा दिन्छ मैले त्यस्तै अभिनय गर्ने हो । कुनै पनि रोल सानो र ठुलो भन्ने हुदैन । मलाई गुण्डाको अभिनयले चलचित्रमा राम्रो देखिन्छ म सोहि अनुरुपको चलचित्र खेल्ने हो । मैले धेरै चलचित्रमा राम्रो अभिनय पनि निभाएको छु ।
६.तपाई चलचित्रमा चै निकै खतरनाक गुण्डाको रोल गर्नुहुन्छ वास्तविक जिवनमा चै तपाई कस्तो मान्छे ?
म निकै रमाइलो मान्छे हुँ । मलाई रिसाउन आउदैन । म जो सगँ पनि हासेर बोल्छु । चलचित्रमा अभिनयका कारण त्यस्तो अभिनय गर्नुपर्छ तर वास्तविक जिवनका भने म रियल हिरो हुँ ।
७.तपाईले चलचित्रमा बढि मात्रामा रेफ सिन सम्बन्धी रोलमा बढि अभिनय गर्नुहुन्छ कहिले काहि असहज महशुस भएन ?
धेरै पटक हुन्छ तर अभियन नै सोहि अनुरुपको पर्छ त्यस्ता कुरालाई पचाउन सिकेको छु ।
८.कुनै चलचित्रमा अभिनय गर्दा कस्ता सम्म व्यबहार भोग्नु पर्यो तपाई ? केहि याद छ ।
किन नहुनु नी गंगाजल चलचित्रको एउटा सिनमा रेफसिनको केस थियो त्यसमा मैले अभिनय गरिरहदा सो गाँउका मान्छेले मलाई थुकेर समेत हिडेका पनि थिए ।
९.यतिका धेरै चलचित्रमा यतिका धेरै सेलिव्रेटि सगँ अभिनय गरिसक्नुभएको छ कुन सेलिव्रेटि सगँ काम गर्दा अभिनय गर्ने सहज महशुस भयो ?
कुन नायक नायिका राम्रो नराम्रो भन्ने हुनुहुन्न मेरा लागी त सबै राम्रो हुनुहुन्छ । मेरो लागी सबै सेलिव्रेटि निकै सहज लाग्छ ।
१०.हाल चलचित्रको गुणस्तर खस्केको छ भनिन्छ,के कारणले यस्तो भएको होला ?
एक त हाम्रो चलचित्रको बजार सानो छ त्यसैले पनि चलचित्र राम्रो सगँ चल्न पाएका छैनन् अनि अर्को कुरा पैसा हुने वितिक्कै चलचित्रको नायक वा नायिका हुन्छ भन्ने नराम्रो विचारले गर्दा पनि यति बेला चलचित्रको गुणस्तर खस्कदै गइरहेको हो ।
११.अब तपाईलाई १० बर्ष पछि आम दर्शकले कहाँ देख्नेछन् ?
पक्कै पनि म यहि क्षेत्रमा नै रहन्छु यस क्षेत्रबाट टाठा हुने विचार कहिले पनि आउदैन । म जति बर्ष बाच्छु म चलचित्रक्षेत्रमा नै रहन्छु ।
१२.अन्ततःपछिल्लो समय कुन चलचित्रमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
हाल चलचित्र कुर्वान,रेन्जर को अभिनयमा व्यस्त छु ।
१३.तपाई आफना दर्शकलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
मलाई मात्र होइन नेपाली सिंग्गो चलचित्रलाई सधै माया गरिरहनु होला । राम्रो चलचित्रलाई रामे भन्दिनु होला नराम्रोलाई के चिज नराम्रो हो भन्दिनु होला यति भन्न चाहानु हुन्छ ।
किसान ठग्ने महाप्रबन्धक थुनामा
एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्र बैंकको कब्जामा